Trano - Coolordrool
Indray mandeha mangatsiaka aho izao,…
New animation El Elie
2 herinandro lasa izay coolordrool
2 volana lasa izay coolordrool
Ny farany amin'ny Lil Elfie
Fitaovana New Street
3 volana lasa izay coolordrool
Skinni Kat Sary 3
Skinni Kat Sary 2
Bilaogera voalohany an'i Coolordrool!
7 volana lasa izay coolordrool
Faly izahay fa nahita an'i Coolordrool!
Mety ho nahita anay tao amin'ny Facebook ianao sy iray amin'ireo kaonty izay manondro eto (ohatra, Facebook.com/Coolordrool, Facebook.com/SkinniKat, Facebook.com/Reallilelfie, na Facebook.com/DeadGirlCoffee).
Eny, nanomboka tamin'ny volana May 2019 ny Coolordrool. Koa vaovao dia tsara tokoa isika.
Ity dia tranokala fialamboly ankamaroany rehefa manolotra Animations avy amin'ny mpanakanto isan-karazany isika.
Tsy izany mihitsy!
Isika ihany koa ny toerana manokana Street Wear vokatra, akanjo avy Skinni Kat, Lil Elfie ary Kofin-jaza maty.
Raha te hividy ny hoditra Skinni Kat, ny mpivarotra Lil Girl Elfie na ny maty ny tovovavy kafe, toy ny T-shirt, ny hoodies ary ny toy izany - ny lambanay, - tsindrio ny Products rohy amin'ny menu.
Ataovy azo antoka tsindrio 'namatrana More'hampiakatra ny sary rehetra!
Dia hitondra anao any amin'ny katalaogy vokatra ianao dia avy eo Shopify ho an'ny Checkout.
Afaka mandefa akanjo tsara isika na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao sy ny tranon'ny tokantrano akanjo Los Angeles, Kalifornia, Etazonia.
Ity misy zavatra tsy azontsika aseho ao amin'ny lisitry ny Products, ary izany no 'somethings' fanampiny izay mampiavaka ny marika ary mety hahatonga anao mangatsiaka kokoa.
Ny marika ary misy marika vita Taratra Fotsy mainty avy any Coolordrool, nozairina isaky ny vokatra (na i Lil Elfie, Skinni Kat, maty ny tovovavy tovovavy maty ...) dia alefa izahay (mazàna amin'ny sisiny havia, havia).
Ity Kanana mainty ity dia hita ao amin'ny Tag (io zavatra manelingelina ao anaty lobaka io izay manome fanazavana momba ny namorona azy). Mahafinaritra, hay?
Ity sary ity ny hevitray:
Dia inona koa?
Miasa izahay mba hanampy vaovao, zavakanto, mozika ary horonan-tsary araka izay azontsika atao. Raha tsapanao dia toa azonao atao ny manolotra ny hevitrao momba ny zavatra iray ("Mieritreritra ve izany sa Cool, Meh, sa Drool?").
Manana rohy koa maimaimpoana izahay Arcade lalao video.
Misy zavatra hafa ary ampianay izay azony atao.
Izahay dia manana rafitra 'rudimentary' napetraka mba hamaly soa anao eto, hifidy ny zavatra, sns Ny valimbola momba ny vola madinika system. Vantany vao mihatsara izy io dia haharesy ny fandraisanao anjara, ary hahazo vola, vola madinika, fihenam-bidy avy amin'ny mpivarotra ianao. Tahaka ny a Co-OP? Izy io dia Co-op.
Koa miangavy anao mba hijanona kely ary lazao amin'ny namana
Mba hanaovana an'izany, manana ny fifandraisanay Social Media (Mpikambana, mpampiasa). Raha misoratra anarana ianao, dia ho hitanao ireo volanao voalohany tonga amin'ny nalehanao! (Ao amin'ny kaontinao izany.)
Mety efa nahita ianao
Miala sarety ⌛️ ...
Fepetra - politika fiarovana fiainan'olona